ကျွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကျွဲ (အင်္ဂလိပ်: Water Buffalo or Domestic Asian Water buffalo) (Bubalus bubalis) သည် အာရှတိုက်တွင် အလွန်ပေါများသော သတ္တဝါဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိက၊ ဥရောပတောင်ပိုင်းနှင့် အခြားဒေသများတွင်လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ ကျွဲသည် ungulate ခေါ် ကြီးမားပြီး ခွာတပ်ခံရသော သတ္တဝါအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ပြီး bovine မျိုးရင်းသေးတွင်လည်း ပါဝင်သည်။ ဩစတြေးလျ မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် feral ခေါ် အယဉ်မှ အရိုင်းပြန်ဖြစ်သွားသော ကျွဲများ အခြေတကျနေထိုင်နေကြပြီး အရှေ့တောင်အာရှတွင်မူ ကျွဲရိုင်းအမြောက်အမြားရှိသေးသည်။ ယဉ်ပါးသော ကျွဲအမျိုးမျိုးတို့သည် တူညီသော ဘိုးဘွားများမှ ဆင်းသက်လာကြပြီး ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်တွင် အခုအခါ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်လုနီး ဖြစ်နေသော ကျွဲရိုင်း(wild Asian water buffalo) အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
၁ သူ၏ သဘာဝ
ထို့ပြင် ကျွဲသည် ရွံ့ညွန်ရေကွက်တွင် လူးတတ်‌သောခြေလေးချောင်း တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ ကျွဲသည် စားမြုံ့ပြန်နေတတ်သည်။ ကျွဲသည် နွားထက် ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် ထွားကြိုင်း၍ ခွန်အားဗလ ပိုမိုကြီးမားသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် လယ်ထွန်ယက်ရာ၌ လည်းကောင်း၊ လေးလံသော သစ်လုံးကြီးများကို ဆွဲရာ၌ လည်းကောင်း ကျွဲယဉ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ကျွဲယဉ်များကို ခိုင်းစေလျက် ရှိနေကြပြီဖြစ်သော်လည်း အာဖရိကတိုက်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ရှိ တောနက်များတွင် ကျွဲရိုင်းအုပ်များကို ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်ကြရသေးသည်။
အာဖရိကတိုက်၌ရှိသော အာဖရိကကျွဲရိုင်းတို့သည် အလွန်သန်စွမ်း ရဲရင့်ကြသဖြင့် မည်သည့်တိရစ္ဆာန်ကိုမျှ မကြောက်ရွံ့ချေ။ အာဖရိကတိုက်သို့ သွားရောက်၍ တိရစ္တာန်များကို အပျော်လိုက်လံ ပစ်ခတ်သူတို့ပင် ဤကျွဲရိုင်းများကို သေနတ်အားကိုးနှင့် မထီလေးစား မပြုလုပ်ရဲကြပေ။ ယင်းတို့ကို မြင်းပေါ်မှဖြစ်စေ၊ သစ်ပင်ထက်မှ ဖြစ်စေ၊ ပစ်ခတ်မှသာလျှင် အသက်ဘေးအတွက် စိတ်ချရသည်။ အဆိုပါ ကျွဲရိုင်းသည် တစ်ကောင်တည်းဖြစ်စေကာမူ ခြင်္သေ့ ၂ကောင် ၃ကောင်တို့နှင့် ဖက်ပြိုင်ရန်ပြုဝံ့သည်။ ထို့ကြောင့် ခြင်္သေ့တို့သည် ကျွဲရိုင်းအထီးများကို ရန်မူလေ့ မရှိကြချေ။ ကျွဲရိုင်းတို့သည် အနံ့ခံကောင်း၍ နားကင်းလည်း ပါးကြသည်။ ယင်းတို့သည် အုပ်စုဖွဲ့၍ နေတတ်ကြရာ အုပ်ထဲမှ ကွဲထွက်သွားသော ကျွဲတကောင်တလေကိုသာ ခြင်္သေ့တို့ သတ်ဖြတ် စားသောက်နိုင်ကြသည်။ ကျွဲရိုင်း၏ သားရေမှာ အလွန်ခိုင်မာသည့်အလျောက် အာဖရိကတိုင်းရင်းသား ကက်ဖာလူမျိုးတို့သည် ထိုကျွဲသားရေဖြင့် ဒိုင်းလွှားများ ပြုလုပ်ကြသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ရှိသော ကျွဲရိုင်းများသည် အာဖရိကတိုက် တောင်ပိုင်း၌ တွေ့ရသော ကျွဲရိုင်းများကဲ့သို့ပင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွဲသိုးကြီးများသည် ၆ ပေမျှ မြင့်၍ ဦးချိုများသည် ၆ ပေခန့်ပင်ရှည်လျားသည်။ ကျားများပင် ထိုကျွဲသိုးတို့ကို ရှောင်သွားတတ်ကြသည်။ ကျွဲယဉ်တို့သည် နွားတို့ထက် ခွန်အားပိုကြီးသည် မှန်သော်လည်း နွားတို့ကဲ့သို့ ကျိုးကျိုးနွံနွံ မရှိလှချေ။ ဝန်စည်ကို သယ်ဆောင်စေကာမူ ရေအိုင်မြင်လျှင် အတင်းဆင်းသွားတတ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယတို့တွင် နို့စားကျွဲမများကို မွေးမြူထားကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗင်္ဂလားကျွဲခေါ် ချိုလိမ်ကျွဲများကို နို့စားရန်အတွက် မွေးမြူကြသည်။ ကျွဲသားရေကို ကျိုသော် ကျွဲကော်ရသည်။ ကျွဲ၏မစင်ကို မြေဩဇာအဖြစ် သုံးလေ့ရှိကြပြီး ခြောက်သွေ့သွားသောအခါတွင် လောင်စာအဖြစ်သုံးကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ချောင်ဘူရီ (Chonburi, Thailand) နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကရာလာနယ် မလာဘာတောင်ပိုင်း (South Malabar Region in Kerala, India) ဒေသတို့တွင် နှစ်စဉ် ကျွဲပြိုင်ပွဲများရှိသည်။ အချို့သော ကျွဲများကို ဝန်တင်ကျွဲအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်မှာ အထူးတပ်ဖွဲ့များပင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
↑ Cockrill, W. R. (1977)။ The water buffalo (PDF)။ Rome: Animal Production and Health Series No. 4. Food and Agriculture Organization of the United Nations။ 16 June 2013 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အပိုင်း-ခ၊ အတွဲ-၂၊နှာ-၂၂၉
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျွဲ&oldid=728148" မှ ရယူရန်
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။